Thailandy: Blogcon Thailandey 2006 · Global Voices teny Malagasy
Thailandy: Blogcon Thailandey 2006
Voadika ny 18 Janoary 2018 9:01 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Martsa taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Notontosaina tamim-pahombiazana tamin'ny Alahady 19 Martsa 2006 ny BlogCon Thailand 2006, fivorian'ireo bilaogera voalohany izay miresaka momba ny Weblogs, ny Fampahalalam-baovao Antserasera sy ny Fiarahamiasa Thailandy ary nahitàna mpandray anjara 25 izay tsy avy any Bangkok ihany, fa koa avy any Phuket, Chiang Mai ary Bali mihitsy aza.
Natao tao amin'ny Oniversiten'i Thammasat, Sampana Asa Fanaovan-gazety sy Fifandraisana Amin'ny Daholobe ao Bangkok, tsy nahomby toy izao ny hetsika raha tsy nisy ny fanohanana mahafinaritra avy amin'ny oniversite sy ny sampana izay nampindrana toerana anay (ary nanome famelombelomana!), Saingy ho an'i Paola Di Maio ny fankasitrahana lehibe izay nanangana ny vondrona WOICT sady nanomana sy nikarakara ny fihaonana tamin'ny fanampiana mahafatra-po avy amin'ireo bilaogera Thailandey tena miavaka, Jim Puntasen sy Chinarut Ruangchotvit.
Betsaka ny fifanakalozan-kevitra sy fampahalalana mahaliana avy amin'ireo mpandahateny nandritra ny fihaonambe.
Don Sambandaraksa, mpanao famakafakana ao amin'ny Bangkok Post IT nanondro ny The Media Slut, bilaogy ifarimbonana tsy mitonona anarana eo amin'ireo mpanao gazety momba ny Teknolojiam-baovao ao Azia Atsimo Atsinanana izay mandefa ny sarin'ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta avy ao Bangkok hatramin'ny nanombohan'ny hetsika.
Ric Shreves, monina ao Bali, mpanao famakafakana iray hafa ao amin'ny Bangkok Post IT nilaza ny bilaoginy Post DB Open Source Project izay mitondra ny fangon'ny Bangkok Post, ary mety ho bilaogy tokana ao Thailand mifandray amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Adihevitra hafa manomboka amin'ny bilaogy ho fitaovana sosialy izay nentin'i Michael Bauwens, mpanorina ny P2P Foundation hatramin'ny lohahevitra mafonja kokoa tahaka ny Fampianarana Thailandey sy ny Fampandrosoana ny Teknolojia ho an'ny Faritra Mahantra Ambanivohitra ary koa ny fomba hanampian'ny bilaogy hanao fanentanana momba ireo lohahevitra ireo mba iadian-kevitra.
Tahiry mahaliana nozarain'i Derek Brown, Talen'ny Varotra ao amin'ny Microsoft Thailand, milaza fa 990,000 ireo mpiserasera MSN Space (fampiharana fibilaogina MSN ) ao Thailand. Nihevitra izy fa ny ankamaroan'ireo mpiserasera ireo, izay ao amin'ny MSN IM ihany koa dia mampiasa fitaovana hizarana vaovao antserasera tahaka ny sary, mozika sy lahatsary.
Nampidirinay koa ny fampiharana bilaogy any Thailandy, GotoKnow.org (Vavahadin'ny Fitantanana Fahalalana Antserasera ao Thailandy) izay manana sy mihazona ny Ivon-toerana Fitantanana Fahalalana (KMI) ao Thailandy, fikambanana miasa amin'ny fitarihana ny fiarahamonina Thailandey ho lasa fiarahamonina mifototra amin'ny fahalalana eo anivon'ny governemanta, ny orinasa tsy miankina ary indrindra indrindra ny fiarahamonim-pirenena.
Azo jerena maimaim-poana, ny pejy fandraisan'ny tranonkala GotoKnow.org dia miasa ho mpanangona lahatsoratra vaovao ao amin'ny tranonkala miaraka amin'ny lisitry ny bilaogy eo amin'ny tsanganana havia izay mamaritra ny sasany amin'ireo bilaogera malaza ho toy ny bilaogera Superstar na bilaogera Star.
Taorian'ny adihevitra naharitra adiny efatra, nifarana tamin'ny 5 ora hariva miaraka amin'ny fanamarihana farany ny fivoriana, ary nanaiky tamim-pifaliana ny rehetra fa nahaliana tokoa sy traikefa fianarana tena ilaina ny fivoriana.
Amin'izao fotoana izao, hivadika ho vondrona antserasera ny adihevitra, na izany aza, efa noresahana ny fihaonana faharoa eo amin'ireo bilaogera Thailandey ary fantatra fa hotontosaina afaka enim-bolana ao Chiang Mai.
Ireo olona na bilaogera liana amin'ny hetsika dia asaina hanatevin-daharana ny vondrona na hijery ny andinindinim-baovao navoaka tao amin'ny bilaogy BlogCon Thailand na wiki.
Azo trohana ato amin’ ity tranonkala ity ny MP3 Blogcon Thailand 2006.
Ato raha hijery sary misy ny hetsika
Amin'ny manaraka indray 🙂